Qaar kamid ah Idaacadaha Muqdisho oo Xagal daacinaya muujinta Dhaqamada Islaamiga ah kadib markii Heesaha iyo Musica laga joojiyay (Warbixin). | Halganka Online
Warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa maalintii 2-aad u hogaansantay awaamir Islaami ah oo ay Ururka Xisbul islaam uga joojiyeen Idaaacadaha layska maqlo Heesaha iyo Miyuusiga Fisqiga ah.
Inkastoo Idaacadaha aysan si dhab ah ugu hogaansamin awaamirta hadana waxay meesha ka saareen Heesihii ay baahinayeen iyo Music hordhac u ahaa Wararka iyo Barnaamijyada idaacadahaasi lagasii dayn jiray.
Warbaahinta ayaan weli ka waantoobin in ay Music-ga wada dhaafaan waxaana lamaqlayaa Music Khafiif ah oo ay ku hoos qarinayaan Iidhahyada ay Idaacadaha kasii daayaan taas oo muujinaysa in ay Xagal daacinayaan awaamirtii islaamiga ee lafaray.
Nacayb ay Akhlaaqda Islaamka u qabaan ayaa laga dareemayaa Milkiilayaasha Idaaacadaha iyo saxafiyiinta ka howlgala iyagoona aan baahinayn Muxaadaraad waxayna taasi muujinaysaa in ay ka xunyihiin joojinta laga joojiyay Heesaha iyo Musica.
Idaacadaha ayaa Astaanta wararka u isticmaalaya Codadka xayawaanada iyo Gawaarida sida Codka Dameerka,Digaaga,Xoolaha iyo waxyaaba lamid ah marnaba Idaacadahani ma Isticmaalin waxyaabo ka maqal wanaagsan codka xayawaanada.
Warbaahin ku caan baxday baahinta Heesaha iyo Musica ayaan baahinayn duruus Islaami ah taas oo muujinaysa in Idaacaduhu ay si ula dagaalamayaan dhaqanka islaamiga ah oo ay doonayaan Islaamiyiinta Somaliya in ay ka Oogaan .
Weriyaasha marka ay ka hadlayaan u hogaansamida Awaamirta Xisbul Islaam ayay si caadifi ah u leeyihiin “anagoo ah Idaacad Hebel waan joojinay Heesihii aan baahin jirnay maadaama Xisbul Islaam sidaasi na amreen” marnaba Weriyaasha heesaha laga joojiyay kuma dhawaaqayaan in baahinta Heesaha iyo Musica lareebay ka hor 1431 HR.
Shareecada islaamka ayaa xaaraantinimaysay dhagaysiga Heesaha iyo Musica ruuxii banaystana uu alle ugu yaboohay Cadaab wax laxwiya waxaana laga daalacan karaa Aayado kamid ah suuratu (Luqmaan) oo si faah faahsan uga hadlaya Heesaha.
Waxaa jira Sedax Idaacadood oo weli baahinaya Heeso iyo Music waxaana Idaacadahaasi gacanta ku haya dhinacyo reer Galbeed ah waana Idaacadaha kala ah Radio Muqdisho (AMISOM), Radio Xormo (UNDP), Radio Bar-kulan (Q.midoobey)
« Maleeshiyaadka Kooxda Riddada oo Xalay Wiil dhalinyara ah ku dilay degmada Dharkeynleey magaalada Muqdisho. Sarkaal katirsanaa Maleeshiyaadka Kooxda Riddada oo Goordhaw iskusoo dhiibay Wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool. »
sumaya, on Seteembar 26, 2010 at 10:51 g said:
asc walaalayal soo noqda waxaan u baahanahay xaqiiqda dhabta aad inooga soo warama jirteen insha allah waan isinka war sugeyna wcs.